Ukuphuma kwelanga okuhle kakhulu nokuthi ungakubona kuphi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Abantu abaningi bahambela izingxenye ezahlukene zomhlaba ukuyobona ukushona kwelanga okuhle futhi ukuphuma kwelanga. Lapho uzama ukukhetha ukuthi yikuphi ukushona kwelanga okuhle noma ukuphuma kwelanga, kunzima ukukhetha ngoba kunokuningi okuthandwayo nemicabango ngakho. Kukhona abanye abakhethwe ngazwilinye ngandlela-thile, abanye yilawo atholakala kakhulu kumanethiwekhi omphakathi futhi kukhona amanye akhetheke kakhulu. Lokhu okukhethekile yilokho okusikhumbuza ngezibopho zabantu esibone lokhu kuphuma kwelanga nabo.
Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi yikuphi ukuphuma kwelanga okuhle kakhulu nokuthi ukukhetha kwakho kusekelwephi.
1 Ukuphuma kwelanga okungcono
2 Uhlu lokuphakama okuhle kakhulu
2.1 Mount Mount Kilimanjaro
2.2 I-Aurora ne-twilight e-Angkor Wat
2.3 I-Stonehenge show yeminyaka eyizinkulungwane
2.4 I-Wadi Rum
2.5 Ukuphuma kwelanga eMachu Picchu
Ukuphuma kwelanga okungcono
UDawn ngesinye sezikhathi abantu abaningi abakhangwa ngaso ngenxa yobuhle baso obungenakulinganiswa. Lwela ngokuqhubekayo nokushona kwelanga ngobuhle nokunambitha. Kunabantu abaningi abangajwayele ukuvuka ekuseni, ngakho-ke ukuphuma kwelanga akuhambisani kakhulu. Futhi futhi ukubheka ukuthi amahora esivame ukuzindla ngawo ngokujulile ajwayele ukubuyela empilweni emahoreni akamuva. Kujwayelekile ukuthi sibe nemibono eminingi lapho kufika ubusuku futhi sijule kakhulu. Lokhu kungenxa yokuthi sithengiswe ngokwengqondo ngokwengeziwe futhi singafika ekubuzeni izinto eziningi. Ngakho-ke, Ukushona kwelanga kunephuzu lokuhlanganisa nokuphuma kwelanga.
Kodwa-ke, akusho ukuthi ukuphuma kwelanga nakho kunobuhle obukhulu futhi kusekelwe kwezinye izici. Into yokuqala ongayikhetha uma ukuphuma kwelanga kukuhle noma umbono wawo wonke umuntu ungenye yezinto ezinhle kakhulu. Lapho abantu bevota kakhulu ukuthi ukuphuma kwelanga kuhle, kulapho uzothola khona udumo. Owesibili uthi kuphuma kangaki ukuphuma kwendawo endaweni ethile ezinkundleni zokuxhumana. Kunabantu abaningi abasizakala ngohambo lokuthatha izithombe ngokuphuma kwelanga. Ekugcineni, kukhona okunye ukuphuma kwelanga okuxhumene ngokuphelele nezinkumbulo nokuthile okuqonde kumuntu ngamunye. Lokho wukuthi, ukuphuma kwelanga kungakhanga kumuntu othile noma oye waphila isikhashana esikhethekile nomuntu. Kodwa-ke, lokho kuphuma kwelanga kungaba yinto ejwayelekile ngokuphelele komunye umuntu.
Uhlu lokuphakama okuhle kakhulu
Mount Mount Kilimanjaro
INtaba iKilimanjaro itholakala eTanzania kanti yize itholakala eduze kwe-Equator nokushisa komhlaba, kusabonakala sengathi imbozwe iqhwa elingapheli. Lezi yizintaba eziphakeme kunazo zonke ezwenikazi lase-Afrika futhi kuvamise ukuthwebula wonke umuntu osondela kulo. Uma ukuvakashela le ndawo kucabanga nangokuphuma kwelanga, ngokuqinisekile uzoba nenkumbulo enhle. Futhi ukuthi ilanga likhanyisa amathafa ase-Afrika kancane kancane futhi unethuba lokubona indlela yezinyoni ze-suimangas nezinkawu ze-colobus njengoba ilanga liqhubeka.
Njengoba ilanga liphuma, udlula emasimini, emahlathini aluhlaza, indawo ekhanyayo yenyanga yeziqongo eziphakeme kakhulu nezimfunda eziphakeme.
I-Aurora ne-twilight e-Angkor Wat
Kule ndawo kudume kakhulu ukuphuma nokushona kwelanga. Itholakala eCambodia futhi ingesinye sezindawo ezidunyiswa kakhulu futhi ezikhunjulwayo yibo bonke abahambi. Inkinga yokukwazi ukubona lokhu kuphuma kwelanga ukuthi izinkumbi zabantu ezigcwele emnyango wazo ukuzojabulela umbukiso ziningi kakhulu. Lokhu kuphuma kwelanga kukhethekile kusukela esibhakabhakeni kanye nemibhoshongo emise okwe-lotus eqoshwe ngezimpimpi zasezulwini eziphethe ukukhombisa echibini elingaphambi kwazo kuvame ukuxubana.
Isethi yokuphuma kwelanga ngesibhakabhaka namathempeli amaHindu yenza lokhu kuphuma kwelanga kube okunye kokufunwa kakhulu emhlabeni.
I-Stonehenge show yeminyaka eyizinkulungwane
Kutholakala e-United Kingdom kuyinkimbinkimbi ye-neolithic ekhuphuka emathafeni aseSalisbury. Uzibuthe onamandla ungakhipha lapha, udonse izixuku zabantu cishe nganoma yiluphi usuku lonyaka. Akekho owazi ngokweqiniso osuse wonke la matshe anesisindo esifinyelela ku-50 wamathani asuka eNtshonalanga Wales aya kuleli kona laseNingizimu yeNgilandi. Akwaziwa ukuthi bangaki abantu abangathola ukuhambisa wonke lamatshe noma ukuthi kuthathe isikhathi esingakanani. Futhi akwaziwa ukuthi besiyini isizathu salokhu kususwa. Ama-menhirs adumile abekwa phezulu komunye nomunye futhi enza imibuthano kanye nesicathulo sehhashi ngaphakathi kuyathakazelisa ukubona lapho ilanga liqala ukuphuma. Ngaphandle kokuthi kunabantu abaningi, i-solstice yasehlobo ingesinye sezikhathi ezikhetheke kakhulu ukubona ukuphuma kwelanga.
Itholakala eJordani futhi ibizwa ngeSigodi Senyanga. Yindawo evikelekile enendawo engamakhilomitha-skwele angama-450. Kuyisimo sendawo esakhiwa izindunduma ezomile nezindawo zamadwala ezilalanisa bonke labo abakubonayo. Lezi zindawo bekukhulunywa ngazo ezindaweni eziningi zamafilimu futhi zibuswa izintaba eziphakeme zamatshe ase-sandstone. Kuyisimo esinzima kodwa esihle kakhulu ukwazi ukubona ushintsho lokukhanya ekuseni nakusihlwa. Ukuphuma kwelanga lapha kuchazwe njengombono ongenakulibaleka.
Ukuphuma kwelanga eMachu Picchu
IMachu Picchu itholakala e-Andes etholakala ePeru. Ngomzila we-Inca ungahamba amakhilomitha angama-43 ehlathini, inkungu namalangabi aholela kule ndawo edumile. Okufanele ukufika enqabeni eqondana nokuphuma kwelanga futhi ngePuerta del Sol. Ngale ndlela ungabona idolobha elilahlekile lama-Inca ngaphansi kwezinyawo zethu eceleni kwethafa eliluhlaza eliluhlaza. Lapha ukukhanya kubukeka kunamandla kakhulu futhi kuyakwazi ukugcizelela ukukhanya kwamathafa aluhlaza. Imininingwane yedolobha ekuphumeni kwelanga ibukeka ingakholeki futhi inani labahamba ngezinyawo livinjelwe kwimvume yokucela udenga okungenani izinyanga eziyisithupha ngaphambili.
Njengoba ukwazi ukubona, ukuphuma kwelanga kungavusa imizwa ehlukahlukene nemizwa ehlasela isibindi neminye imizwa. Indlela engcono yokusebenzisa lezi zindawo ukuya kulabo bantu esizizwa sikhululekile uma sinabo, futhi nakanjani kuzoba yinto engasoze yalibaleka. Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda mayelana nokuphuma kwelanga okuhle kakhulu emhlabeni.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Ukuphuma Kwelanga